४० कटेपछि यी चार कारणले मधुमेह रोगीलाई हृदयघातको खतरा -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०८, २०७८ समय: १०:०२:०५
मधुमेहका बिरामीमा सधैं मुटुरोगको खतरा बढी रहन्छ । वास्तवमा मधुमेह र मुटुरोग दुबैको सुरुवात गलत जीवनशैलीका कारण हुने गर्छ । साथै, दुबैले एक अर्कालाई प्रभावित गर्छन् । जस्तै मधुमेह बिरामीमा ब्लड सुगर असन्तुलित हुँदा रक्तचापमा गहिरो असर पर्छन् । वास्तवमा, मधुमेहले शरीरका साना रक्तनलीलाई हानी पुर्याउँछ जसका कारण रक्तनलीका भित्ता कडा हुने गर्छन् ।
यसो हुँदा रक्त सञ्चारमा दबाब पर्छ र रक्तचाप उच्च हुने गर्छ । यस्तोमा रक्तचाप र टाइट टु मधुमेहको संयोजनले तपाईंलाई हृदयघात वा स्ट्रोकको खतरा बढ्ने गर्छ । त्यसो भए मधुमेहमा हृदयघातलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, यसबारे ‘ओन्ली माई हेल्थ’ ले भारतीय डाक्टर नित्यानन्द त्रिपाठी ( फोर्टिस अस्पतालका निर्देशक तथा विभाग प्रमुख) सँग कुराकानी गरेको छ ।
डाक्टर नित्यानन्द त्रिपाठीले मधुमेहमा हृदयघातको कुरा गर्र्दै ३० देखि ४० को उमेरमा मधुमेहका बिरामीमा अचानक हृदयघातको खतरा किन बढ्छ भन्ने बारे थाहा पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले यसको पछाडि थुप्रै कारण भएको बताएका छन् । यी कारण थाहा नभएको खण्डमा मधुमेहका बिरामीले हृदयघातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने पनि उनले बताएका छन् ।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज र एथेरोस्क्लेरोसिस मधुमेहमा हृदयघात हुनुको अर्को एउटा ठूलो कारण छ । वास्तवमा, मधुमेहका कारण आर्टरी ब्लड भेसल्स (धमनी) कडा हुन्छन् र मुटुसम्म अक्सिजन र रगत सही तरिकाले सञ्चारित हुन पाउँदैन । यसकारण हृदयघातको खतरा बढ्ने गर्छ । साथै रक्तनलीमा कोलेस्ट्रोल जम्मा हुँदा पनि मधुमेह रोगीलाई यो उमेरमा हृदयघातको खतरा रहन्छ ।
३०–४० उमेर यस्तो हुन्छ जसमा हामी निर्धक्कसँग खानपिन गर्छौं । यो उमेरमा हामीलाई मधुमेह नै किन नहोस् हामी खानपिनसँग सम्बन्धित हाम्रो बानीमा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौं । यस्तोमा अत्यधिक चिल्लो र मसालेदार खानाले तपाईंको शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढाउने काम गर्छ । जब यो कोलेस्ट्रोल प्लक टुट्छ तब शरीरले त्यसको मर्मत गर्नका लागि प्लेटलेट्स पठाउँछ । यी प्लेटलेट्स पछि गएर थ्रोम्बर बन्नका लागि जम्मा हुन्छन् जसका कारण मुटुलाई अक्सिजन र पौष्टिक तत्व पुर्याउने रक्त कोसिकामा बाधा पुग्छ र हृदयघातको खतरा निम्तिन्छ ।
डा. नित्यानन्द त्रिपाठीका अनुसार मधुमेहबाट ग्रसित मानिसहरुलाई हृदयरोगको उच्च खतरा हुनुका साथै उनीहरुलाई कार्डियक अरेस्ट हुने खतरा पनि अत्यधिक हुन्छ । यसका साथै हार्ट फेलियरको खतरा पनि रहन्छ । हार्ट फेलियर यस्तो गम्भीर स्थिति हो जसमा मुटुले पर्याप्त रुपमा रगत पम्प गर्न असमर्थ हुन्छ । त्यसैले बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुने र शरीरका अन्य भाग सुन्निनेलगायतका समस्या देखिन्छ ।
मधुमेह भएकाहरुलाई हृदयघातबाट जोगाउने उपायः
डा. त्रिपाठीलाई विश्वास गर्ने हो भने हृदयघातबाट बच्नका लागि सुरुमा मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र हृदयघातका लक्षणबारे थाहा पाउनुपर्छ । हृदयघातको लक्षण देखिएमा यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । जस्तै सास फेर्न समस्या, बेहोस हुनु, काँध, बंगारा र बाँया हातमा दुखाई र छाती दुख्छ (विशेषगरी कुनै गतिविधिका बेला) भने तपाईंले मधुमेह नियन्त्रण गर्नका लागि केही टिप्स अपनाउनुपर्छ ।